Prototyping Concepts elsdị | Echiche Prototype - Mepụta Proto - Mepụta Proproto Tech Co., Ltd.
Ngwa / Ihe akaebe nke echiche
Mepụta nkeProto na teknụzụ prototyping na ihe na-enye ndị ahịa anyị ohere ị nweta ụdị echiche a niile n'oge niile nke usoro nhazi maka nyocha anya nke atụmatụ, ọdịdị, arụmọrụ na anya na mmetụta. Na-enwe ike ikwurịta okwu nke ọma na ndị otu imewe na ndị ahịa, nweta nzaghachi imepụta oge, ma bụrụ nke ka mma n’ọdịnihu!
Ebumnuche emezuru site na Echiche Ntuziaka Echiche
Gịnị Bụ Echiche Echiche?
Ihe omuma bu ihe okike kachasiputa mmepe nke mmeputa ihe ebe ndi injinia na ndi okike na-eche echiche na azacha na uzo di iche iche. Ọ bụ mmalite nke ngwaahịa na-emepe emepe na mkpụrụ obi nke ihe ọhụrụ, usoro mmeghari oge izizi na okirikiri, na-enyere aka maka nyocha kachasị mma na imepụta njikarịcha.
Kedu ihe kpatara Echiche Eji Echiche Dị Nnọọ Mkpa Iji Bido na Usoro Nhazi?
Ọ ghaghị ịbụ ihe mbụ n'ihi na nsonaazụ nke echiche echiche ga-abanye na usoro nhazi na usoro injinia na-esote. Ogologo oge echiche gị na-echere ka akpọgide ya, ọ ga-adịkwu oke mmepe ahụ. N'ezie, ịga nke ọma nke ngwaahịa a dabere n'inweta echiche ahụ na mbido. Elegharala mkpa nke ngosipụta nke echiche (POC) anya ma gaa n'ihu n'emeghị ka gị na ndị ọzọ gosipụta na echiche gị ga-arụ ọrụ na teknụzụ.
Kedu ihe kpatara CreatProto na-elekwasị anya nke ukwuu na Prototyping Concept Design?
Conceptdị ihe eji eme ihe eji eme ihe ngwa ngwa, nke dị ọnụ ala bụ ngwa ọrụ bara uru iji nyefee ndị ọrụ ibe gị echiche, echiche ma ọ bụ echiche dị iche iche na usoro 3D na kọmputa anaghị eru.
Site na ngwakọta teknụzụ na akụrụngwa, CreateProto na-enye ndị ahịa anyị ezigbo ohere iji mepụta ngwa ngwa ngwa n'oge niile nke usoro nhazi maka nyocha ọhụụ nke atụmatụ, ọdịdị, arụmọrụ na anya na mmetụta niile.
Tupu ịmalite ịga n'ihu n'okporo ụzọ na-emepe ụdị nke ngwaahịa gị, ị kwesịrị inwe ọtụtụ akụkụ nke ihe ngwọta gị. Agbanyeghị ngwaahịa dị mgbagwoju anya, otu n'ime ihe izizi nke Createproto na-emere gị bụ iji gosipụta na ebumnuche ngwaahịa ga-eme nke ọma iji nwee ọganiihu.
Mepụta ihe ngosipụta nke echiche gị
Nzọụkwụ iji gbanwee echiche gị dị ka eziokwu
Chọrọ (Ideas) -> Design Concepts -> CAD Modelling -> DFM Analysis -> Concept Prototype -> Design Optimization
Mgbe i kpebiri ngwaahịa chọrọ, tupu ịmalite zuru ezu imewe, gị oru ngo ga-ahụ kwagara echiche imewe ogbo.
A na-eme nhazi zuru ezu site na 3D na mmemme CAD siri ike, dị ka SolidWorks. Emere ụdị CAD maka akụrụngwa na mgbakọ iji chọpụta nsogbu nwere ike tupu emee akụkụ ahụ ọ bụla.
Mgbe ejiri ihe eji eme ihe maka imepụta ihe (DFM), a ga-ahazi akụkụ na mgbakọ iji hụ na ekwesiri maka ike ịmepụta.
Gị zuru ezu imewe ga-wuru iji 3D ebi akwụkwọ ma ọ bụ ndị ọzọ ngwa ngwa prototyping usoro. N'oge a, imewe gị ga-amalite ịdị na-adị ka ọ dị adị - ọ na-atọ ụtọ!
Nzukọ nke echiche mbụ bụ ihe dị oke mkpa na usoro iji kwado echiche ndị gara aga. Nnwale anụ ahụ na-egosi na ụdị ihe atụ ahụ na-ezute arụmọrụ arụmọrụ e guzobere n'oge usoro echiche ahụ.
Ọ bụrụ na achọrọ mgbanwe, a ga-emegharị ụdị CAD ma gbanwee echiche ya ruo mgbe atụmanya niile mezuru.
CreateProto na-enye usoro dị iche iche maka usoro ị ga-eji na-eme ngwa ngwa
Anyị kwenyere na imepụta echiche dị oke mkpa iji mepụta nnukwu ngwaahịa. Mepụta echiche dị iche iche tupu ị banye n'ime usoro imepụta injinịa dị mkpa n'ihi na ha nwere ike ịkwalite usoro ịme ngosi uwe nke imepụta ngwaahịa ma bulie ihe ọhụrụ. Echiche ụdị dị mkpụmkpụ, mana ọ bara uru n'iwebata echiche gị na ndụ.
Iji kwalite usoro a, ị nwere ike ịnwe ọtụtụ ọdịiche dị iche iche nke imepụta n'otu oge, nyochaa nhọrọ dịka ịke, arụmọrụ na usoro nrụpụta, wee họrọ nke kachasị mma site na iji otu akụkụ n'akụkụ.
Teknụzụ na-emepụta teknụzụ maka ihe akaebe nke ụdị echiche eji eme ihe bụ Stereolithography (SLA), Selective Laser Sintering (SLS) na CNC Machining, nke a na-ahọrọkarị maka ịtụle ụdị echiche na imewe.
Ọrụ nnabata ngwa ngwa nke Creativeproto na-enyere ndị otu ime ihe aka ibelata usoro sitere na usoro imepụta ngwaahịa ọdịnala ha, na-eme ka ngwa ahịa ngwa ahịa ngwa ngwa.
Prototype gụchara ga-eme ihe dị iche maka a ịga nke ọma echiche prototype. Anyị ukwuu ahụmahụ finishing otu na-enye n'aka gụchara, primer, agba-egwuregwu agba, udidi na adụ-aka imecha; ma jiri usoro ụzọ dị iche iche mee ihe iji dozie nzukọ ziri ezi na ọdịdị ọdịdị kachasị mma.
Prototyping Product Design Concepts Enye Gị ikike
Zụlite ma mezie echiche dị na ngwaahịa ka ị na-echekwa oge dị mkpa na ego.
Nweta nzaghachi a na-apụghị ịgbagha agbagha site na imetụ aka na mmetụta.
Mee nhazi iterations nwekwuo onwe site na inyocha ihe nlere.
Mee ka ndị ọrụ ibe gị, ndị ahịa, na ndị isi gị nwee echiche gị.
Debe ihe ọgụgụ isi gị n'ụlọ.
Nyochaa ihe ngwọta kachasị mma maka imepụta ihe.
Bilie-amalite na ahịa eme.
Otito Prototyping, Fast Prototyping, Otito Prototyping na Manufacturing, CNC Rapid Prototyping, Ọrụ 3d Printing & Rapid Prototyping Services, CNC Prototyping,